EUR / GBP Na-agbakwunye na 0.8800, Nleghachite Anya na Ọkwa 0.8821
Enweghị asịsa na EUR / GBP Na-agbakwunye na 0.8800, Nleghachite Anya na Ọkwa 0.8821
Ọkwa Nchịkwa Isi: 0.9200, 0.9400, 0.9600
Ntọala Nkwado Isi: 0.8800, 0.8600, 0.8400
EUR / GBP Ahịa Ogologo Oge: Bearish
Kemgbe Jenụwarị 7, EUR / GBP na-ada ọ bịaruokwa ala ogo 0.8851. Na Jenụwarị 14, na-ada mbà, otu kandụl weghachitere na 88.6% Fibonacci retracement larịị. Ntughari na-egosi na ụzọ ahụ ga-adaba na ọkwa 1.1129 Fibonacci. Omume ọnụahịa anwalela ọkwa Fibonacci ma na-eme ka ọ laghachi azụ.
EUR / GBP - Chart nke Ugboro
MAbọchị 50 na ụbọchị 21 nke SMA na-agbada n'ụzọ kwụ ọtọ. The ụzọ adawo larịị 35 nke ikwu Ike Index oge 14. The paụnd bụ n'okpuru centerline 50. The price na-abịaru nso oversold mpaghara.
EUR / GBP Mkpụrụ nke oge ọkara / GBP: Bearish
Na chaatị 4-hour, EUR / GBP anọgidewo na-ada. Na Jenụwarị 14 downtrend; a retraced kandụl ahu anwale 78.6% Fibonacci retracement larịị. Ntughari ego na-egosi na ụzọ ahụ ga-ada ma gbanwee na ọkwa 1.272 Fibonacci ma ọ bụ ọkwa 0.8821. Site na ọnụahịa, ahịa na-agbakọ maka mgbanwe enwere ike.
EUR / GBP - Chaatị Oge 4
Sbọchị 50 nke SMA na ụbọchị 21 nke SMA na-agbada ala. Pairzọ ahụ dị n'okpuru ebe 30% nke stochastic kwa ụbọchị. Uzo ahu di ugbu a n'agba. The paụnd na-eru ike ọgwụgwụ.
General Outlook maka EUR / GBP
Ihe paụnd ahụ yiri ka ọ na-agwụ ike ọgwụgwụ. Di na nwunye a na-eme ka onu ogugu di elu 0.8800 maka mgbanwe ghari. Ngwaọrụ Fibonacci egosila na enwere ike ịgbanwe na ọkwa 1.272 ma ọ bụ 0.8821 dị ala.
→ EURO Rebounds na ECB Economic Outlook, US Dollar Agbanwewo Nzuzo Mgbe Mwepụta